VOLA VAOVAO : Efa miparitaka eraky ny tanàna sahady ny vola sandoka 10 000 Ariary
Tsy nisy iray volana akory aty aorian’ny nivoahan’ireo vola vaovao dia efa vitan’ireo olon-dratsy sahady ny manao dika mitovy amin’ilay ravim-bola iray alina Ariary. 8 août 2017
Ireto mpivarotra am-bongadiny no tena lasibatra ary nahitana ity tranga ity ny eny Namontana sy Ankadindratombo iny.
Renim-pianakaviana iray mpivarotra amina toeram-pivarotra lehibe eny Namontana no efa nahazo vola sandoka iray alina Ariary amin’ilay vola vaovao vao nivoaka. Nambarany fa raha jerena tomba-maso fotsiny dia tena mitovy tsy misy valaka amin’ny tena izy ilay sandoka fa kosa rehefa tena jerena tsara izay vao hita ny fahasamihafany.
“Ny fanaonay dia maka entana am-bongadiny ny ankamaroan’ireo mpanjifa. Mivarotra izany aloha izy ka aorian’izay vao atao ny fandoavam-bola izay mahatratra hatrany amin’ny efatra na dimy tapitrisa Ariary. Noho ny fahamaroan’ireo vola ireo dia tsy mahavita mijery tsara izahay fa isaina fotsiny fa rehefa any an-trano vao jerena tsara ka tany no nahitana fa misy tsy mitovy ireo vola”, hoy ny fanazavan’ilay ramatoa mpivarotra.
Nambarany fa miisa fito ireo ravim-bola 10 000 Ariary azony hatreto ary tsy fantany mazava izay olona nahazoany izany. Araka ny fanazavana nomeny hatrany dia eo amin’ilay mangirangirana, sy ilay sarin’omby ao anatin’ny vola no tsy nampitovy ilay vola tsy ara-dalana tamin’ilay tena izy. Mila mailo, araka izany ny rehetra. Na dia niezaka aza ny avy eo anivon’ny banky foiben’i Madagasikara mba tsy hahafahan’ireo mpanao vola sandoka manao ny asa ratsiny dia mbola mahita hirika hatrany ry zalahy.
Mila mailo ny rehetra manoloana izany indrindra fa ireo mpikirakira vola. Araka ny loharanom-baovao voaray, ankoatran’ny eny Namontana dia nahitana io trangana vola sandoka io ihany koa ny tena Ankadindratombo.
2020-09-28 21:55:17 par Royal CBD
mamHZh to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any suggestions or techniques for new blog owners please